Esi ere ngalaba aha gị Martech Zone
Esi ere ngalaba aha gị
Saturday, December 24, 2016 Wednesday, December 28, 2016 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị dị ka m, ị na-anọgide na-akwụ ndị ngalaba aha ndebanye ụgwọ kwa ọnwa ma na-eche ma ọ bụrụ na ị na-mgbe na-aga na-eji ya ma ọ bụ ọ bụrụ na onye ọ bụla na-aga ịkpọtụrụ gị ịzụta ya. Enwere nsogbu di na nwunye na nke a. Akpa, mba… na ị gaghị eji ya. Kwụsị ịkwa emo, ọ na-efu gị ụyọkọ ego kwa afọ na enweghị nkwụghachi na ntinye ego ọ bụla. Nke abụọ, ọ dịghị onye maara na ị na-ere ya - yabụ kedu ka ị ga-esi enweta onyinye?
Afọ iri gara aga, usoro a bụ ime nlegharị anya nke ngalaba ahụ, mata onye nwe ya, wee malite ịgba egwu nke onyinye na ịnye onyinye. Ozugbo i kwenyere na ọnụahịa ahụ, ị ​​ga-amalite akaụntụ escrow. Nke ahụ bụ onye nke atọ na-ejide ego iji hụ na ebufere ngalaba ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. N'oge ahụ, akaụntụ escrow na-ewepụta ego nye onye na-ere ya.
Ọ dị mfe karị ugbu a. Iji oru dika Ngalaba, ị nwere ike ịdepụta ngalaba gị niile na ọrụ ha. Ha na-ewere ezigbo ego nke ire ere ahụ, mana ha jikọtara n'ọma ahịa a na-achọ achọ, peeji nke ọdịda ọdịnala, na akaụntụ escrow niile n'okpuru otu ikpo okwu. Nke a na - eme ka ọ dị mfe ịnweta ngalaba gị ma ree ya.
Kedu ihe ị na-eche? Tinye ndị a na-anaghị eji ya (na ndị nke ejiri mee ihe) ugbu a:
Chọta ma ọ bụ Ree gị na ngalaba Aha
Kedụ ka ị si edozi ọnụahịa ngalaba na-arịọ gị?
Anọ m na-eme nke a ruo nwa oge na nke ahụ bụ ajụjụ siri ike. Onye na-ere ere nwere ike ịhụ na ọ bụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye na-azụ ihe bara ọgaranya na-azụ ma na-akparịta nnukwu ego ịzụ ya. Ma ọ bụ onye na-ere ahịa nwere ike ịbụ onye nzuzu ma hapụ nnukwu ngalaba aha maka obere ihe ọ bụla. Anyị azụtala ma rere otu tọn ngalaba aha ma ọ bụ ọnọdụ nrụgide mgbe niile. Enwere ụfọdụ iwu dị mfe dịka ngalaba dị mkpụmkpụ nke na-enweghị akara ma ọ bụ ọnụọgụ na-emekarị ọmarịcha. Aha ndị toro ogologo ogologo nwere mkpụrụedemede edeghi ede emeghị nke ọma.
The TLD .com ka bara uru karịa ebe ọ bụ na ọ bụ nnwale mbụ n'ime ọchụchọ ma ọ bụ ihe nchọgharị iji chọta saịtị. Ọ bụrụ na ngalaba ahụ nwere ọdịnaya ma chụọ nsonaazụ ọchụchọ (na-enweghị ebe njedebe nke malware ma ọ bụ ihe na-akpali agụụ mmekọahụ), ọ nwere ike ịba uru na ụlọ ọrụ na-anwa ịchụpụ ahịa okporo ụzọ ma ọ bụ ikike maka akara ha.
Rulekpụrụ isi aka anyị bụ ime ihe n'eziokwu na mkparịta ụka anyị. M ga-ekwukarị mgbe niile na onye zụrụ ahịa na-ebute ụzọ mbụ iji nye onye na-ere ya mmeghachi omume ozugbo ma azụmahịa ahụ ọ ga-aba uru. Dịka onye na-azụ ahịa, anyị nwere ike igosipụta na anyị na-azụ maka nnọkọ nke ndị ọzọ n'ihi na ha chọrọ ịnye ọnụahịa ziri ezi na-akwụghị nnukwu ego. Anyị na-emekwa ka onye na-ere ahịa mara na anyị chọrọ ịkwụ ụgwọ ihe ngalaba ahụ bara uru na-enweghị ịkụda onye na-ere ya. Ná ngwụsị nke mkparịta ụka ahụ, ndị otu abụọ na-enwekarị ọ happyụ.
Akwụkwọ ọdịda ọdịda
Bakc ka Ngalaba. Site na-emelite DNS m maka ngalaba aha m, DomainAgents na-ewepụta nnukwu ọdịda peeji iji mee ka ngalaba ahụ dị mfe ịzụta. Nke a bụ nnukwu ihe atụ, lelee otu ngalaba m - addressfix.com.
Ndị a bụ ngalaba ndị ọzọ anyị debere maka ire ere, ụfọdụ dị mma ma dị mkpụmkpụ, ụfọdụ na-ewu ewu (na ọnụ ahịa kacha nta dị mkpa).
akwụkwọ akụkọ whitepaperlaunch.com
Ngosipụta: Anyị na-eji njikọ njikọ anyị maka Ngalaba N'ime oge a.
Tags: ire ngalabangalabaego ole ka ngalaba aha gị baraesi akwụ ụgwọ ngalaba ahaesi ere ngalaba aharee ngalabaree ngalabaNkeji
Brand24: Iji Ntinye Nlekọta Na-echebe ma Na-amụba Azụmaahịa Gị
Ọrụ Computech Tech
Dec 29, 2016 na 8:56 PM
Ezigbo ozi na ndụmọdụ dị mma. Ọ dị ọnụ ala karịa ịhapụ mpaghara ndị a na-anaghị eji eme ihe karịa ị na-akwụ ụgwọ ụgwọ kwa afọ.